Oxiracetam Nootropics: सबै कुराको बारेमा तपाईलाई जान्नु आवश्यक छ
हामी सबै एक बिन्दुमा आफैलाई नाईट शिफ्टमा काम गरिरहेको पाउँछौं, कडा समयसीमा पिट्ने, वा परीक्षणको लागि मध्यरात्रको तेल समेत जलाउने। त्यसोभए, यी कार्यहरू मध्ये कुनैको बारेमा सोच्दा तपाईको दिमागमा पहिलो कुरा के आउँछ? म तपाईंलाई शर्त दिन्छु कि तपाईंले एक कप तातो ध्यान केन्द्रित कफीको बारेमा सोच्नुभयो वा केही शक्तिको पेय पदार्थ।(Nootropic परिवार)
ठिक छ, नूट्रोपिक्स तपाईंको साधारण क्याफिनको कप होइन। तिनिहरूले तपाईको दिमागलाई उत्तेजित पार्ने, अनिद्रालाई उत्तेजित गर्ने र कष्टकर चिट्ठीहरू निम्त्याउने कामहरू भन्दा अधिक गर्दछन्।
एक डोज तपाईको बौद्धिक क्षमता बढाउनको लागि पर्याप्त छ, शक्ति तपाईको कपाल क्षमता, र तपाइँको सिकाउने क्षमता सुधार गर्न। यो तथ्य सत्य हो कि धेरै राम्रो देखिन्छ, सही छ? तपाईंको घोडा समात्नुहोस् किनकि त्यहाँ ब्याक अप गर्न थुप्रै सफल क्लिनिकल परीक्षणहरू छन्। सबै पछि, मेडिकल डाक्टरहरूले रेसट्यामको क्षमता पत्ता लगाए र डिमेन्शिया, एडीएचडी, र अल्जाइमरको.
के तपाई आफ्नो सीमा भन्दा पर जान खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंले यो असीमित गोली निल्नुभन्दा पहिले, पत्ता लगाऔं कि औषधि यसको लायक छ कि छैन।
रेष्टम के हो?
रेट्यामहरू कृत्रिम यौगिकहरू हुन् Nootropic परिवार। समूहमा १ 15 भन्दा बढी बिभिन्न रसायनहरू छन्। ती सबैमा दुई पायरोलिडोन न्यूक्लियसको साथ अक्सिजन, हाइड्रोजन र नाइट्रोजन अणुहरू हुन्छन्।
यद्यपि तिनीहरू एक रासायनिक ब्याकबोन साझा गर्छन्, प्रत्येक रेष्टमको समानान्तर प्रकार्य हुन्छ। संरचनात्मक झुकावमा भिन्नता शक्ति, कार्य गर्ने संयन्त्र, चयापचय, खुराक, र आधा जीवनमा असमानताहरूको लागि जिम्मेवार छ।
रेसट्यामहरूले मस्तिष्कमा एसिटाइलकोइनको स्तर परिमार्जन गर्दछ। न्युरोट्रान्समिटरले प्रायः संज्ञानात्मक कार्यहरूको लागि ध्यान पुर्‍याउँछ, सावधानी, तार्किक सोच, फोकस, एकाग्रता, र मेमोरी गठन सहित।
रेष्टम अन्य सबै nootropics को अग्रदूत हो। यद्यपि यसको अस्तित्व संयोग मात्र थियो।
डा। कर्नेलियु गिर्जेआ र उनका सह-अन्वेषकहरूले एउटा अणु डिजाइन गर्दै थिए जसले असाधारण निद्रा बान्की र गति बिरामीलाई उल्ट्याउन सक्छ।
यद्यपि, भाग्यको मोडबाट, यी वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि कम्पाउन्डले फोकस बढाउन र प्रयोगकर्ताको मानसिक अवस्थालाई उच्च पार्न सक्छ। यस साइड इफेक्टको फाइदा उठाउँदै डा। कर्नेलियु गिर्गेआ र उनको टोली अनुभूति र मस्तिष्कको कार्यक्षमतामा रेसट्यामको भूमिका अनुसन्धान गर्न अघि बढे।
सफल खोज पछि, पाइरासिटाम रेसटम परिवारको गॉडफादर भयो। यो आविष्कार १ 1964 inXNUMX मा भयो। त्यस पछि अनुसन्धानकर्ताहरूले यस जेनेरिक स्मार्ट औषधिलाई सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता देख्यो र ओक्सिरासिटाम नूट्रोपिक्स सहित उत्कृष्ट संस्करणहरू लिएर आए।
Oxiracetam पाउडर रेष्टम परिवारको पानीमा घुलनशील नूट्रोपिक हो। यौगिक जेनेरिक piracetam स्मार्ट औषधि को एक व्युत्पन्न हो। यो १ 1970 s० को दशक पछि पहिलो रेसटम नूट्रोपिकको खोजी पछि अस्तित्वमा आएको थियो। त्यसोभए, अर्को पटक तपाई पिरिसेटम नूट्रोपिक ऑक्सीरसिटाममा दौडिनुहुन्छ, अचम्म मा लिनुहोस् किनभने तिनीहरू समान छन्।
पूरक उमेर सम्बन्धित अम्नेशियासँग डिलिनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। यसका साथै, यसले केही रोगहरूसँग सम्बन्धित अनुभूति र बौद्धिक क्षमताको गिरावटलाई सुस्त बनाउँछ। संक्षेपमा, यी स्मार्ट ड्रग्स मेमोरी बढाउनुहोस्, ध्यान तिर्ने, र सिक्ने प्रक्रिया सुधार।
Oxiracetam पाउडर (62613-82-5) piracetam भन्दा छ गुणा शक्तिशाली छ। यो एक nootropic र एक हल्का उत्तेजक को रूप मा डबल्स। तपाईंको सामान्य क्याफिनेटेड पेय जस्तो नभई, यस रेसटमले तपाईंलाई जिटर वा अनियमित निन्द्रा ढाँचामा जोखिम नगरी सतर्कता बढावा दिन्छ। यद्यपि कम्पाउन्डले तपाईंलाई जागृत राख्दछ, प्रभाव कम्तिमा नगन्य हुन्छ तपाईले महसुस गरिरहनु भएको भावनाको तुलनामा न्यानो हुन्छ तपाईले एक कप कप कफीमा पछाडि पछाडि छोड्दा।
क्लिनिक रूपमा, यो डिमेन्शिया, संज्ञानात्मक बिगठन, र मस्तिष्कमा अपर्याप्त रगत प्रवाहको साथ संघर्ष गरिरहेका बिरामीहरूका लागि पर्चेको खुराक हो।
कसरी Oxiracetam काम गर्दछ?
Oxiracetam nootropics प्रोटीन, फास्फोलाइपिड, र न्यूक्लिक एसिडको उत्पादन बढाउँदछ। यी अणुहरू मस्तिष्क कोष झिल्ली निर्माण गर्न जिम्मेवार छन्, यसैले, ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि।
मूरिन मोडेलहरूमा, Oxiracetam ले ग्लूटामेट बाइन्डिंग साइटहरूको संख्या गुणा गर्‍यो। यस प्रभावले मस्तिष्क कोषहरूमा प्रवेश क्याल्शियम आयनको प्रवर्धनमा ल्यायो। ग्लुटामेट केन्द्रीय न्युरोट्रान्समिटर हो, जसले न्युनन्स बीच आवेगको प्रसारण नियन्त्रण गर्दछ।
ओक्सिरासिटेम मानसिक शक्ति गृहमा अक्सिजन, एसिटिचोलिन, र ग्लूकोजको प्रयोग पनि बढाउँछ। एसिटिचोलिनले सजगता, फोकस, मेमोरी, र तार्किक सोच सहित धेरै जसो संज्ञानात्मक कार्यहरू नियन्त्रण गर्दछ। न्युरोट्रान्समिटरले पोषण र मस्तिष्कमा दक्ष रगत प्रवाहको आपूर्तिलाई बढावा दिन्छ, कोषको पतनको सम्भावना सीमित गर्दै।
त्यहाँ केही अनुमानहरू छन् कि ऑक्सिरासिटामले डी-एस्पार्टिक एसिडमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ, जसले न्युरोनल प्रणाली भित्र चयापचयको विस्तार गर्दछ।
हल्का उत्तेजक प्रभावहरूका लागि धन्यवाद, oxiracetam पाउडरले दुवै NDMA र AMPA रिसेप्टर्सहरू जलाउँदछ। नतिजाको रूपमा, तपाईको मानसिक उर्जा अंकित हुन्छ जब सचेतता चुचुरो लाग्छ। तपाईंको कफीको कफि वा ऊर्जायुक्त पेयमा यस न्यूरो-ह्याकरको फाइदा यो हो कि त्यहाँ कुनै घिमिरे साइड इफेक्ट, चिन्ता, वा पछाडि क्र्याश छैनन्।
Oxiracetam बनाम Aniracetam, Piracetam; Wछ मतभेद हो?
सबै तीन नूट्रोपिक्सले स्ट्रक्चरल ब्याबोन साझेदारी गर्छन्। पाइरासिटाम विपरीत, ऑक्सीरसिटामको संरचनामा थप हाइड्रोक्साइल समूह छ, जसले यसको शक्ति विस्तार गर्दछ।
जबकि oxiracetam ध्यान र एकाग्रता अवधि सुधार गर्न काम गर्दछ, एनिरसिटेम मूड बढाउने मा champs। इच्छुक व्यक्तिको लागि आफ्नो कामको घण्टा पर्याप्त विस्तार गर्न, oxiracetam ठीक ठीक डाक्टरले आदेश गरेको हो। जे होस्, यदि तपाईं छोटो अवधि का नतिजा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, aniracetam ले काम गर्दछ। यस बिन्दुमा, oxiracetam बनाम aniracetam बहस आफ्नो स्थिति र आवश्यकताको आधारमा ड्र गर्न कोर्दछ।
तीन रेसट्याम मध्ये, oxiracetam पीक nootropics अत्यधिक शक्तिशाली छ। यस कारणका लागि, डोज अन्य दुईको भन्दा सानो छ। उदाहरण को लागी, एक विशिष्ट aniracetam खुराक प्रति दिन 700 देखि 4000mg को बीच। जहाँसम्म, oxiracetam को साथ, तपाईं अझै पनी उस्तै प्रभाव महसुस हुनेछ जब यो राशिको आधा लिने।
यद्यपि यी रेसट्याम्सले एसिटिचोलिन, ग्लूटामेट न्युरोट्रान्समिटरहरू, र एएमपीए रिसेप्टर्सहरू मोड्युल गर्दछन्, तिनीहरू मध्ये प्रत्येकले यसको विशिष्ट बाध्यकारी साइट गर्दछ। तसर्थ, कार्य को संयन्त्र फरक छ। Piracetam, aniracetam, र oxiracetam को सबै भन्दा महत्वपूर्ण फाइदा के हो भने ती परिणामहरु लाई प्रभावित बिना ती सबै एक साथ स्ट्याक गर्न सकिन्छ।
के रेसिटाम परिवारको अन्य सबै नोट्रोपिक्सको बीचमा ऑक्सीरसिटाम बाहिर खडा बनाउँछ यसले केहि उत्तेजित गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ। यस तुलनाबाट, तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ कि कसले लिira्क लिनको लागि oxiracetam vs piracetam चुनौती।
Oxiracetam का कस्ता फाइदाहरू छन्?
यसको शक्ति को कारण, oxiracetam nootropic क्षेत्र मा सबै क्रोध भएको छ। महत्वाकांक्षी विद्यार्थीहरूले पुस्तकहरूलाई हिर्काउँदा लिइरहेका छन् ताकि उनीहरू आउँदो जटिल परीक्षाको लागि पर्याप्त विश्वास प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसको विपरित, व्यवसायिक व्यक्ति र कलाकारहरूले यसको सिर्जनात्मकता, तार्किक सोच, र उत्पादकता बढाउन प्रयोग गर्दछन्।
Oxiracetam पाउडर 62613-82-5 को अफ-लेबल अनुप्रयोगको बारे बिर्सनुहोस्। यो nootropic शुरूमा चिकित्सीय कार्यहरूको लागि डिजाइन गरिएको थियो। किनकि यसले मेमोरी गठन र अवधारण सुधार गर्दछ, डाक्टरहरूले यसलाई डिमेन्शियासँग काम गर्ने सल्लाह दिएका छन्। यसका साथै पार्किनसन सिन्ड्रोम, एडीएचडी, अल्जाइमर, र स्किजोफ्रेनिया जस्ता केही मानसिक विकारहरू र उमेरसँग सम्बन्धित रोगहरू प्रबन्ध गर्न यसको केन्द्रीय भूमिका छ।
धेरै कम नूट्रोपिक्ससँग वास्तविक क्लिनिकल डाटा हुन्छ। जहाँसम्म, तपाईं धेरै कारणहरूको लागि oxiracetam पीक nootropics मा बैंक गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईंले यो तथ्यलाई किन्नुभयो मेमोरी बृद्धि गर्दछ? ठीक छ, त्यहाँ जानकारी को यस टुक्रा को बैक अप गर्न केहि दस्तावेज मानव परीक्षणहरू छन्। डिमेन्शियासँग संघर्ष गरिरहेका बुढ्यौली बिरामीहरूसँग सम्बन्धित क्लिनिकल अध्ययनहरूमा अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि रेसटमले छोटो अवधिको मेमोरी र मौखिक प्रवाह दुवै पुनर्स्थापित गर्दछ। डीजेनेरेटिभ र पोस्ट स्ट्रोक डिमेन्शियाको प्रबन्ध गर्दा Oxiracetam उपयोगी छ।
कुनै नोट्रोपिक स्मार्ट ड्रगको रूपमा लेबल हुन योग्य छैन जबसम्म यसले क्रैनियल क्षमता बढाउन सक्दैन। यस अवस्थामा, oxiracetam सतर्कता, ध्यान, ध्यान, र प्रतिक्रिया समय बढाउँछ। त्यसकारण, रेसटम बौद्धिक कार्यहरू कम हुने बिरामीहरूको लागि आदर्श पर्चा हो। विशेष क्लिनिकल परीक्षणमा, यसले निन्द्रामा सुधार ल्यायो र दुबै तनाव र चिन्ता कम गर्‍यो।
नूट्रोपिकले मस्तिष्कको पावरहाउसमा न्युरोप्रोटेक्टिव प्रभाव पार्दछ। Oxiracetam उच्च खुराक स्मृति हानि रोक्न सक्छ। संज्ञानात्मक कमजोरी को मामला मा संभवतः उच्च उचाई र कम अक्सिजन स्तर को कारणले स्मार्ट औषधि प्रभाव प्रतिरोध गर्न मा कदम। अरू के छ, मस्तिष्क आघात, चोट, वा स्ट्रोक neurotoxicity, संज्ञानात्मक गिरावट, र उमेर-सम्बन्धित रोगहरूको परिणामस्वरूप nootropic प्रतिलिपि।
उच्च रक्तचापसँग संघर्ष गरिरहेका बिरामीहरूले दिमागको जलन र रगतको सम्भावना महसुस गर्दछन्। भर्खरको आविष्कारमा, अक्सिरासेटम लिनुले यस अ organ्गमा रगतको बहाव बढाउँदै प्रभावलाई बाधा पुर्‍याउँछ, यसैले पुनःप्राप्ति प्रक्रियालाई छिटो बनाउँदछ।
अनलाइन प्लेटफर्महरूमा ओक्सिरासिटाम समीक्षामार्फत योजनाले पुष्टि गर्दछ कि नोटो्रपिकले मुडलाई पुनर्स्थापना गर्दछ, उर्जा सुधार गर्दछ, र काम र स्कूलमा अधिकतम प्रदर्शन बढाउँदछ। त्यसो भए, यदि तपाइँ तपाइँको मौखिक प्रवाह तीव्र पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ वा छोटो हिज्जे भित्र एक नयाँ भाषा सिक्न चाहानुहुन्छ भने, यो पूरक तपाइँको अर्को सफलताको कहानी हुन सक्छ।
Oxiracetam को अन्य क्लिनिकल अनुप्रयोगहरुमा चिन्ता, निद्रा विकार, डिप्रेसन, र गति बिमारीको व्यवस्थापन समावेश छ। यदि यो सबै छैन भने, अध्ययनहरूले अब एंटी-एजिंग गुणहरूको साथ कम्पाउन्ड ब्रैकेट गर्दैछ। जब तपाईको हजुरआमा तपाईले दुई पटक तिर्खाएको महसुस गर्नुहुन्छ तब अचम्म नमान्नुहोस्।
म कती अक्सिरासेटम लिन सक्छु?
ध्यान दिँदै कि oxiracetam एक शक्तिशाली छ nootropic racetam परिवार मा, यो piracetam को तुलना मा न्यूनतम खुराक छ। औषधि कैप्सूल, ट्याब्लेट, वा पाउडर फारम मा oxiracetam nootropics डिपो मा उपलब्ध छ। उच्च घुलनशीलता गुणहरु को लागी धन्यवाद, oxiracetam कुशलतापूर्वक पानी संग मिश्रण हुनेछ ताकि तपाइँ पिउन को लागी एक निलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ।
एक सामान्य अक्सिरासिटाम पाउडर खुराक प्रति दिन m००mg हो। जहाँसम्म, केहि व्यक्तिहरू १०००mg को रूपमा माथि जान्छन्। स्मार्ट ड्रग प्रणालीमा सात घण्टा सम्म स्थिर रहनाले तपाईले तालिका बनाउनु पर्नेछ र प्रिस्क्रिप्शनलाई दुई खुराकमा विभाजन गर्नुपर्नेछ।
केही ऑक्सिरासिटाम साइकोनाट्सले रकम तीन वा चार भागमा विभाजन गर्न सल्लाह दिन्छ, तर म तपाईंलाई यो प्रयास गर्न सल्लाह दिदिन। के तपाईंलाई थाहा छ किन म दिनको दुई खुराक लिन्छु? ठिक छ, किनभने यो छ कि नूट्रोपिकको उत्तेजक गुणहरू निस्सन्देह तपाईंको निद्रा बान्कीमा हस्तक्षेप गर्दछ।
आदर्श रूपमा, तपाईले औषधि प्रशासन गर्नुको सबैभन्दा नयाँ समय बिहानको पहिलो हो। जब सम्म तपाईं आधी रातको तेल जलाउँदै हुनुहुन्छ, रातको शिफ्ट गर्दै हुनुहुन्छ, वा कडा समयसीमा पिट्ने कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईंले यसलाई गोधुलो पछि लिनु हुँदैन।
क्लिनिक रूपमा, प्रिस्क्रिप्शन रकम तपाइँ व्यवस्थापन गर्न चाहेको सर्तमा निहित छ। उदाहरणका लागि, डिमेन्शिया रोगीहरूले २०००mg / दिन दिन लिन सक्दछन्। मानव परीक्षणहरूमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले सल्लाह दिन सक्दछन् Oxiracetam थोक पाउडर १२००mg र २1200००mg बीच बीचको अध्ययन समूह।
पूरक लिँदा त्यहाँ पालना गर्न कुनै अनौंठो प्रोटोकलहरू छैनन्। यो ठीक छ कि तपाईं यसलाई खाली वा पूर्ण पेटमा प्रबन्ध गर्न चाहनुहुन्छ।
एक oxiracetam स्ट्याक aniracetam शामिल हुन सक्छ, pramiracetam, र piracetam। Cholinergic प्रणाली को अवरोध को लागि बनाउन कोलीन पूरक सम्मिलित गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। अन्य संयोजनहरूमा मोडाफिनिल र सल्बुटिमाइन समावेश हुनुपर्छ।
Oxiracetam लाई काम गर्न कति समय लाग्छ?
एक घण्टा पर्याप्त छ
उपभोग पछि, Oxiracetam एक देखि तीन घण्टा पछि यसको चरम स्तरमा पुग्छ। यस बिन्दुमा, औषधी जठरांत्र पथमा अवशोषित भएको छ र पछि रगत-मस्तिष्क अवरोध पार गर्दछ। त्यसो भए, यदि तपाई आउँदो टेस्टलाई पूर्ण आत्मविश्वासका साथ एक्सेस गर्न चाहानुहुन्छ भने गतिविधिको एक घण्टा पहिले डोज लिन निश्चित गर्नुहोस्।
एक सामान्य oxiracetam आधा जीवन सात देखि नौ घण्टा बीचमा। प्राकृतिक र मानव अध्ययनमा अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूले अध्ययन समूहमा उल्लेखनीय सुधार देखेका थिए।
जब तपाईं लगातार पाँच दिन सम्म oxiracetam लिनुहुन्छ, तपाईं निश्चित रूपमा शिखर प्रदर्शनमा पुग्नुहुनेछ। त्यसोभए, अर्को पटक तपाईले ग्राउन्डब्रेकिंग गतिविधिको योजना लिने योजना बनाउनु भएको छ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि पाँच दिन पहिले नै oxiracetam पाउडर खुराकको तालिका बनाउनुहोस्।
के Oxiracetam एक उत्तेजक हो?
हो, यो छ
यद्यपि यसले केही हल्का उत्तेजक गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ, ऑक्सिरासिटामले तपाईंको सामान्य ऊर्जा पेय वा कफीको रूपमा कार्य गर्दैन। तपाईले यस तथ्यलाई पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ किनकि तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ कि उत्तेजकहरूले दिनको अन्त्यमा जिटरहरू र चिन्ता निम्त्याउँछन्। केस oxiracetam संग फरक छ किनकि यसले तपाईंको मुड उच्च पार्छ, सतर्क राख्दछ, र तपाईं भन्दा पहिले बढी ऊर्जावान।
मलाई टेक पछि कस्तो महसुस हुन्छआईएनजी oxiracetam?
के तपाईंले कुनै चीजको लागि साइक अप नभएको अवस्थाको चित्रण गर्नुभयो? कहिलेकाँही, तपाईं एक साधारण अनुच्छेद पढ्न सक्नुहुन्छ तर केवल अन्तमा पुग्न र महसुस गर्नुहोस् कि तपाईंले एक शब्द पनि बुझ्नुभएन।
ठीक छ, oxiracetam समय को निक मा एक प्रतिभा मा रूपान्तरण गर्न सक्छ। एक खुराकले तपाईंलाई उत्प्रेरित राख्दछ, तपाईंको फोकस सुधार गर्दछ, र सतर्कता बढाउँदछ। यदि तपाईं कम महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने, निश्चित गर्नुहोस् पूरकले तपाईंको मुड बढाउनेछ र तपाईंलाई क्लाउड नौमा लैजानुहोस्।
Oxiracetam प्रशासनको एक घण्टा पछि, तपाईंको दिमाग खाली हुनेछ। त्यहाँ कुनै अलमल्याउने वा दिमाग कोहरे हुनेछैन।
के यो oxiracetam लिन सुरक्षित छ?
Oxiracetam सुरक्षित छ।
अहिलेको रूपमा, कुनै पनि डाटा यसको सुरक्षालाई उच्च खुराकमा खण्डन गर्न उपलब्ध छैन। जहाँसम्म, तपाईंले ध्यान दिनु पर्दछ कि स्वस्थ र युवा प्रयोगकर्ताहरूमा प्रतिकूल लक्षणहरू पुष्टि गर्न अपर्याप्त क्लिनिकल अध्ययनहरू छन्।
रोगजनक साइड इफेक्ट रोक्न, सम्भव न्यूनतम खुराकको साथ शुरू गर्न निश्चित गर्नुहोस्। कसरी तपाइँको शरीर प्रतिक्रिया मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ रकम को आवश्यकता अनुसार समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यो चरण मात्र एक अनियमित मापन हो किनकि प्रायः क्लिनिकल अध्ययनहरूले २ira०० मिलिग्रामसम्म ओक्सिरासिटाम बल्क पाउडर प्रयोग गर्‍यो, तर कुनै गम्भीर लक्षणहरू भने थिएनन्।
जब Oxiracetam लिदै, methamphetamines र रक्सीको सफा गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस्। यी यौगिकाहरूलाई नूट्रोपिकसँग स्ट्याक गर्नु घातक हुन सक्छ किनकि यसले सायकोसिस, व्याकुलता, वा रक्तचापलाई बढावा दिन्छ।
जे होस् बोर्डबारीमा टाउको दुखाइ सामान्य लक्षण हो, तपाईं यसलाई कोलीनमा समृद्ध स्रोतहरूको उपभोग गरेर सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यी पूरकहरूले बदाम, अण्डाहरू, र कलेजो समावेश गर्दछ। तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि मैले निद्रालाई सूचीमा राखेको छु एकलाई ऑक्सीरसिटाम साइड इफेक्टमध्ये एकको रूपमा। यद्यपि तपाईले यो नकरात्मक नतिजा अनुभव गर्नुपर्नेछ केवल जब तपाईले उच्च डोज लिनुभयो वा सुत्ने समयको नजिकै प्रशासन गर्नुभयो।
हालसम्म, oxiracetam को दक्षता मा ठोस प्रमाण Alzheimer's, डिमेंशिया, ADHD, र पार्किन्सन रोग संग संघर्ष गरिरहेका वयस्कहरु मा छ। स्वस्थ, युवा मानिसहरूका लागि, स्मार्ट औषधिको प्रभावकारिताको बारेमा सबै कुरा मात्र सुनुवाई हो।
रेष्टम परिवारमा प्राय: औषधिहरू भन्दा फरक, Oxiracetam दिमाग कोहरेको अनुभव गर्ने संभावना कुनै पनि नजिक छैन।
Oxiracetam का साइड इफेक्टहरू
निद्रा बान्की अवरोध
यदि तपाईं आफ्नो खुराकमा टाँसिनुहुन्छ भने Oxiracetam साइड इफेक्टहरू बाइपास गर्न सजिलो हुन्छ। जब लक्षणहरू असहनीय हुन्छन्, तपाईंले खुराक कम गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
Oxiracetam किन्नुहोस्, Oxiracetam कानूनी हो?
यद्यपि यसका औषधीय फाइदाहरू छन्, oxiracetam ले FDA स्वीकृति प्राप्त गरेको छैन। अमेरिका मा, उदाहरण को लागी, स्मार्ट ड्रग मात्र एक को रूप मा बिक्री को लागी गरीएको छ आहार पूरक। त्यस्तै, अक्सिरासेटम पाउडर युकेले कडा नियमहरूको सामना गर्नुपर्दछ जबसम्म प्रयोगकर्तासँग मान्य प्रिस्क्रिप्सन हुँदैन। पर्याप्त रमाईलो, यस राज्य मा nootropic किन्न को लागी एक अधिक यसलाई पनी भन्दा अधिक दण्ड छ।
जब तपाईं भर्चुअल स्टोरमा चेक इन गर्नुहुन्छ Oxiracetam पाउडर खरीद परेशानी-मुक्त छ। ठिक छ, त्यहाँ तिनीहरू मध्ये धेरै छन्, तर तपाईं Quacks बाट एक वास्तविक अनलाइन विक्रेता बाहिर एकल गर्न आवश्यक छ।
यदि तपाईं शुद्ध nootropics oxiracetam trubrain स्रोत बनाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं हामीलाई एक अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई सुविधा प्रदान गर्दछौं, र हाम्रो उत्पादनहरु को गहन गुणवत्ता नियन्त्रण प्रक्रिया को माध्यम बाट।
वर्षौंको दौडान, नूट्रोपिक्स र असीमित गोलीहरूको प्रयोग साइकोनाट्स, अन्वेषकहरू र चिकित्सा चिकित्सकहरूबीच व्याप्त क्रोध हो। यसबाहेक, इन्टरनेटले पार्कमा केवल एक पैदल पैदल बनाएको छ। तपाईलाई वैध पर्ची पनी आवश्यक पर्दैन Oxiracetam खरीद स्नीकरको एक जोडी मा बाहिर splashing जत्तिकै सजिलो छ।
मध्यम मस्तिष्कलाई उत्तेजित गर्दा Oxiracetam अनुभूतिलाई बढावा दिन्छ। यसलाई लिँदा एक ध्यान केन्द्रित र सचेत रहन्छ। यसका अतिरिक्त, यसको मेमोरी रिटेन्सन, सिक्ने क्षमता, र मौखिक प्रवाहमा यसको प्रभावले बौद्धिक अक्षमतासँग सम्बन्धित रोगहरूको उपचारको लागि स्मार्ट औषधिलाई आदर्श बनाएको छ।
यसको प्रभावकारिताको बाबजुद, अमेरिका सहित अधिकांश राज्यहरूमा ऑक्सीरसिटाम कानूनी हुँदैन। यद्यपि स्मार्ट न्यूरो-हैकरहरूले ऑक्सीरासिटाम अमेजन विक्रेता र विश्वभरि असंख्य अनलाइन विक्रेताहरूको फाइदा लिन्छन्।
औषधि यसको न्यूनतम साइड इफेक्ट को कारण लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। अक्सिरासिटाम उच्च खुराकमा पनि, तपाईं नकरात्मक अप्उट्समा कम सम्भावना पाउनुहुनेछ। आखिर, मानव परीक्षणहरूमा, अनुसन्धानकर्ताहरूले २ira००mg को मात्राको oxiracetam खुराक सिफारिस गर्छन्। दिनको अन्त्यमा, अध्ययन समूहले कुनै प्रतिकूल प्रभावहरू दर्ता गरेन।
मेनन, GN, Itil, TM, Itil, KZ, र Songar, ए (१ 1986 XNUMX) CNS फार्माकोलजी र Oxiracetam को क्लिनिकल चिकित्सीय प्रभाव। क्लिनिकल न्यूरोफार्माकोलोजी।
माल्ख, एजी र सदाइ, एमआर (२०१०) Piracetam र Piracetam-like ड्रग्स: मूल विज्ञान बाट उपन्यास क्लिनिकल अनुप्रयोग सम्म CNS विकार। नोवोमेड परामर्श, रजत स्प्रि,, मेरील्याण्ड २० 20904 ०XNUMX, संयुक्त राज्य अमेरिका.
पेरूक्का, ई।, अल्ब्रिसी, ए, परिणी, जे।, फेरेरो, ई।, र भिस्कोन्टी, एम (१ 1987 XNUMX)। Oxiracetam फार्माकोकाइनेटिक्स बुजुर्गमा एकल र बहु ​​खुराक व्यवस्थापन। युरोपियन जर्नल ड्रग मेटाबोलिज्म र फार्माकोकिनेटिक्स।
Zongxiu Nie एट अल। (२०१ 2017) (S) -Oxiracetam Oxiracetam मा सक्रिय घटक हो जुन चूहोंमा क्रॉनिक सेरेब्रल हाइपोपरफ्यूजन द्वारा प्रेरित संज्ञानात्मक कमजोरीलाई कम गर्दछ। प्रकृति प्रकाशन समूह
कोमेतानी, एम।, ओकाडा, एम, टेकमोरी, ई।, हासेगावा, वाई, नाकाओ, एन, र इनुकाई, टी। (१ 1991 XNUMX १)। प्रि-क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेन्ट, सीबा-गेगी लिमिटेड, जापान। प्रि-क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेन्ट, सीबा-गेगी लिमिटेड, जापान.
१.रेष्टम भनेको के हो?
२.अक्सीरसेटम के हो?
3. कसरी Oxiracetam काम गर्दछ?
O.ओक्सिरासेटम बनाम एनिरासेटम, पिरसेटम; भिन्नता के हो?
Ox.अक्सीरासेटमको फाइदा के हो?
H. मैले कती अक्सिरासेटम लिन सक्छु?
Ox. अक्सिरासेटमले काम गर्न कति समय लाग्छ?
I.अक्सीरसेटम एक उत्तेजक हो?
Ox। अक्सिरासेटम लिइसके पछि म कस्तो महसुस गर्छु?
१०. के यो ओक्सिरासेटम लिन सुरक्षित छ?
११.अक्सीरसेटमको साइड इफेक्टहरू
१२.अबिरासिटाम, ओक्सिरासेटम कानूनी हो?